Oprah Winfrey naPrince Harry Vanounza Hutano hwepfungwa kuApple TV + munaMay May | Ndinobva mac
Yakaziviswa mu2019 kuburikidza ne Instagram uye mushure kunonoka kugadzirwa inozopedzisira yaratidza paApple TV + muna Chivabvu. Kuburitswa kwakasimbiswa panguva yekubvunzurudzwa naOprah paThe Drew Barrymore Show. Izvo hazvisi izvo zvega zvigadzirwa zvakamiswa nekuda kwedenda, asi ichokwadi kuti kuva nemushandirapamwe padyo padyo, zvinhu zvakawanda zvinouya mupfungwa, kunyanya mamiriro azvino ePríncipe ayo atinogona kutsanangura seye nhepfenyuro.
Muna Kubvumbi 2019, kubatana kwaPrince Harry naOprah uye Apple TV + kugadzira dzakateedzana nezve hunhu hwematambudziko ehutano hwepfungwa. Kuziviswa kweiyi nhevedzano kwakaitwa nemachinda kuburikidza neakaundi yavo Instagram, chinyorwa chakateedzana icho chingagadzirisa matambudziko ehutano hwepfungwa pasirese, kwete muUnited Kingdom chete. Muhurukuro paThe Drew Barrymore Show naOprah, akasimbisa kuti kuratidzwa uku kwaizove kupera kwaMay.
Iyo inesimba yakawanda-chikamu chikamu chinyorwa chakanangana nezvose zviri zviviri kurwara kwepfungwa uye hutano hwepfungwa. Ichaedza kukurudzira vateereri kuti vave nehurukuro yakatendeseka nezvematambudziko anosangana nemumwe nemumwe wedu. Pamusoro pazvose, maitiro ekuzvishongedzera isu nematurusi ekuti tirege kungopona, asi kuti kubudirira.
Inotaridzika zvakanaka uye kuratidzwa kweakateerana kunoitika panguva yakanaka kwazvo. Tichifunga nezvekuti denda iri harina kungokonzeresa dambudziko rehutano nehupfumi, asiwo rezvehukama. Kutaurirana pakati pevanhu kwakadzikiswa uye izvi zviri kukonzera kuwanda kwekutarisana nevashandi vehutano hwepfungwa.
Tichafanira kumirira pakupera kwaMay kuti uone mafambiro anoita nhepfenyuro muchinda uye neOprah inowirirana
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Oprah Winfrey naPrince Harry kuunza hutano hwepfungwa kuApple TV + mukupera kwaMay
MacOS Big Sur 11.4 yechipiri beta yevagadziri